Maraykanka & QM oo ku gacansayray xil kororsiga golaha wakiilada federaalka ah ee Somaliya. – Radio Daljir
Maraykanka & QM oo ku gacansayray xil kororsiga golaha wakiilada federaalka ah ee Somaliya.
Febraayo 4, 2011 12:00 b 0
Nairobi, Feb 04 – Qoraalo ka soo baxay wasaarada arrimaha dibeda ee Maraykanka & xafiiska Qaramada Midoobay (QM) u qaabilsan Somaliya ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay go’aanka xil kororsiga ee mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya.
Qoraalka ka soo baxay safaarada Maraykanka ee Nairobi ayaa xusay in xil kororsigu uu meel ka dhac ku yahay ummadda Somaliyed, ayna dib u dhac ku tahay dhismaha dawlad sharci ah oo leh karti waxqabad.
Waxaa lagu dhaliilay mudanayaasha baarlamaanku in aanay gudan xilkooda, ayna ku guul daraysteen hirgelinta qorshihii dawlada ee bud-dhiga u ahaa heshiiskii Jabuuti ee 2009.
Waxaa loo soo jeediyey hoggaanka dawlada federaalku in uu dib uga fiirsado go’aanka daneed ee ay gaareen, ayna bilaabaan la tashi dhab ah oo ay la yeesheen saamileyda gobolka, iyo daneeyayaasha arrimaha Somaliya.
Dhinaca Qaramada Midoobay (QM), Dr. Mahiga, ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Somaliya oo isna qoraal ka soo saaray go’aanka baarlamaanka ayaa ku tilmaamay mid nasiib darro ah, lana gaaray iyada oo aan la samayn wax wadatashi ah oo ku salaysan sida ugu mudan ee looga gudbi karo xilliga kala-guurka ah, loona dejin lahaa qorshihii lagaga gudbi lahaa Ogoosto 2011, oo ah marka uu dhamaan doono xilliga dawlada federaalku.
Dr. Mahiga waxaa uu sheegay in uu wadatashi la samayn doono madaxda dawlada federaalka ah, kalana hadli doono wixii laga yeeli lahaa mustaqbalka dawlada federaalka ah.
Mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya ayaa shir ay shalay (Feb 03, 2011) yeesheen isku raacay xil kororsi saddex (3) sanno ah.
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya oo isku raacay xil kororsi 3 sanno ah oo sharciyaynaya jiritaanka golaha wakiilada.